Mai Chibwe VekwaZimuto: Mishonga yechivanhu
Mishonga yechivanhu yakawanda chose inoshandiswa pane zvakawandisa asi kana tichida kutaura chokwadi tinoti mizhinji yacho hapana chainoshanda. Asi pakutaura izvi kana tichitaura tine ungwaru tinoonazve kuti mishonga inowanikwa muzvipatara hapana chainoshanda.
Mishonga mizhinji inotengeswa kuti vakaigadzira vawane mari chete. Ukaverenga nyaya dzematest anoitwa pamishonga unoona kuti haana kukodzera pane zvinozoshandiswa mishonga yacho.
Hino yedu yechivanhu haitombotesitiwi zvachose uye hapana anonyora kuti mugwere amwe makapu mangani emushonga wacho.
Imwai mishonga muchihwisisa kuti kazhinji haishandi pane zvauri kufungira kuti ndizvo zvainoshanda.
Kana uchida kuita mari nokukasira, unganidza midzi isingaurai vanhu ugoiisa muzvibhodhoro ugoudza vanhu kuti inorapa chigwere chokuti nechokuti. Uchaona kuti vanhu havana basa nokuti iwe nyakutengesa unoziva sei kuti mushonga uyu unorapa chigwere. Havakubvunzi uye havana basa nokuziva kuti umwe munhu akamborapiwa nawo mushonga uyu ndiani.
Kutengesa mushonga wechivanhu hazvinetsi zvachose. Hurumende haina basa nokuti uri kupa vanhu mushonga. Unongotengesa hako, vanoda kumwa nekapu vanomwa, vanoda kumwa nechipunu vanomwa.
Kana wada kuwedzera mari chienda unotengesera kunzwimbo yausingazikamwi. Vanhu havadi kutenga mushonga kubva kumunhu wavanoziva.
Pane zvigwere zvakawandisa murudzi gwedu zvinoonekwa navanhu sezvigwere asi zvisiri zvigwere.
Sokuti munhu aita mimba
Unoona vakuru voenda kunotenga mishonga vokuisira muzvokudya. Kwahi uyu
Mushonga wekuti mwana asatanga makumbo pakubuda
Mushonga wekuti mwana aite mukomana/musikana
Mushonga wekuti masuwo avhurike mwana abude
Mushonga wenhova kuti isawira mumusoro wemwana
Mushonga wekuti mwana asafa kana abatwa nomunhu ane uroyi
Mushonga wekuti chibereko chidzokere pasaizi yacho nokukasira.
Sokuti munhu asvika makore gumi nemaviri kune mishonga inodiwa.
Mushonga wekukudza chombo chomukomana
Mushonga wekudhonzesa matinji
Mushonga wekubvisa zviminyamutundo mumakumbo
Mushonga wekukudza bhinzi
Mushonga wekuti mazamu akure
Mushonga wekuti mazamu amire.
Mushonga wekuti ndigodiwa nomukadzi/murume
Mushonga wekuti mwana agone muchikoro
Mushonga wekuwanisa basa
Mushonga wekuchengeta basa
Mushonga wekuisa mumvura yekugeza yemurume
Mushonga wekutundisa mukadzi pakuisana
Pese apa hapana chigwere asi pane mishonga.
Ukatarisa pazvinhu zvechiShona zvinorapiwa uchaona kuti pane zvakawandisa zvisiri zvigwere asi vanhu vanonotenga mishonga iyi vachiishandisa vadaro vobva vonoudza hama neshamwari dzavo kuti mushonga uyu unoshanda. Uya ane bhizimisi rake rokutengesa mushonga obva atowedzera mari.
Chikwadi ndechokuti hakuna mishonga iyi zvainoshanda kungotambisa mari chete. Pamwe kutokuvadza mwana wako kana une mimba ichingodya mishonga isina basa. Kana waita mimba, mwana achatoti abude chete. Izvi zvakaitika kubva kare mabwe dzichi nhuku. Hakuna mwana anorega kubuda achiti nokuti mai havana kudya mushonga. Masuwo ekuzvara anongokura kusvika mwana abuda napo chete. Munyika dzese dzisina mushonga uyu vanozvara vana seiko? Musaudzana nhema. Hazvivaki munhu kumuudza nhema.
Kana uchigaromwa mishonga yausingahwisisi kuti inorapa chii uye kuti une chigwere chacho here kana kwete, uchaona kuti pakuzopera kwemakore uchaita chigwere chetsvo ( KIDNEY ) nokuda kwe OVERLOAD yauri kudzipa pakumwa mishonga iyi. Hatisi kuti mishonga yeChiKaranga hapana zvainorapa. Tiri kuti imwa mushonga kana une chigwere chinoda kurapiwa. Mimba hachisi chigwere. Uyezve kana une mimba, mwana wako anodya zvese zvaunodya iwe, saka kana uchimwa mishonga uri kutofidhawo mwana mishonga yacho iyoyo zvinova zvinokwanisa kukuvadza mwana.
Varipo vanotadza kuzvara zvakanaka vozoitwa OPERATION, asi hazvinei nemishonga yenhema iyi. Ndosaka zvimwe zvivana zvichingozozvagwa zvisina njere. Mai vacho vanenge vadya twakawanda. Wozoona mwana otadza kusvika kana Form 2 chaiyo nokufoira.
Vanhu vechiSHONA takadzidzsana nhema kubva kare zvokuti ukabvunza munhu chero akadzidza sei unohwa achikuudza kuti mishonga yechirungu koita mishonga yechivanhu. Yechivanhu kuti ishande inoda munhu anouya nayo otanga aita zvimwe zvinhu zvinotaridza kuti iye nemushonga wake ndivo vanoshanda. Mushonga wega haushandi, iyewo ega haashandi. Panoitwa zvimwe zvinotaugwa ipapo zvaunongoona wega kuti hazvinei nomushonga uyu. Zvinonetsa kuti tibve panyaya idzi nokuti takadziudzwa kubva tiri vanana.
Kune vanhu vakawanda chose vanofunga kuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kuroya vamwe. Ukabvunza munhu anotaura nezvekuroyana kuti kuroya kuita sei, unokasira kuhwisisa kuti haatombozivi kuti kuita sei asi anofunga kuti zvinoitika. Anotokuudza kuti muroyi munhu anofamba usiku asna kupfeka achikwanisazve kuita sipidhi iri pamusorosoro kutopfuura iya inohi pachirungu SUPERSONIC SPEED, iri ngari yokuti kuroya kunongokwanisika usiku chete saka anofanira kuenda kwaanoda kuroyera nokudzoka kuzhe kusina kuedza.
Zvatauri venhema idzi vakaona kuti shuwa hazviiti kuti munhu ega akwanisa kudai ndokubva vawedzera zvinoshandiswa ndokutanga kuti varoyi
Vanovamba vakatasva bere
Vanofamva vakatsva zizi
Wega kana wakachenjera unongoona kuti nyaya chaiyo hapana asi kuti nyakutaura uyu haatombohwisisi zvaari kutaura asi anongotaura zvaakaudzwa nomunhu waanoobatira pamusoro, sokuti mubereki, mbuya, sekuru, kana imwe hama.
Isu tine hama imwe yakadzidzi chose kuenda kumaUNIVERSITY matatu. ndokuita mabasa ari pamusoro. Ndokuzobata HIV muna 2007. Ikozvino ukaverenga FACEBOOK yake anotaura ipapo kuti akaroiwa namai vake nokuti paaishanda basa riri pamusoro ange asingavapi mari yakawanda. Ikozvino anogara muchitangwena chemakadhobokisi achiita mari yokupemhwa. Uku akamitisa vasikana vatanhatu, vamwe vacho vane HIV kubva kwaari.
Tichitarisa nyaya yakadai tinoona kuti hapana nyaya yeuroyi zvachose asi kuti murume uyu haana kugamuchira upenyu zvakanaka uye akasarudza kuita zvisina maturo. Iye ega ndiye akazviroya. Mai vake munhu anototamburawo kuti sei mwana wavo avakatamburira kudzidzsa ava kugara muchitangwena achinyora paFacebook yake kuti vanoroya. Vhiki yakapera akatoporomisa vanhu kuti ane PROOF yokuti mai vake ndivo vanoroya. Ukuzve ari kuti hama ngadzitumire motokari indomutora kwaari kuPretoria adzoke kumusha. Akadzoka ivo mai vake ndivo vachamuchengeta asi nhasi ari kupapadzira kuti vari kumuroya.
Nyaya dzevaroyi inyaya dzenjere chete. Kana usina njere unofunga kuti varoyi variko. Kana ukatora nguva uchizvifunga unoona kuti varoyi hakuna.
Kune vanhu ve ZANU PF vanoshungurudza vanhu mumaraini asi hakuna anombovaroya. Koita iye President wedu Mugabe. kuvengwa kwaanoitwa navamwe vanhu, asi hakuna anomuroya. Koti murume anohi Jonathan Moyo vanhu vaimbomuvenga chose asi hakuna akamuroya. Zvinofamba sei?
ko sipo inoshandiswa sei kuvhura nzira